Chhalaang (2020) | MM Movie Store
မှနျတူဟာ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားကောငျ….ပြျောပြျောနတေတျသလို လူငယျအဖှဲ့ရဲ့ ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျအလုပျတှလေညျးခေါငျးဆောငျလုပျလရှေိ့တယျ…ဘာအလေးအနကျမထားတတျလို့ ဘှဲ့လညျးမရခဲ့ဘူး…ဒါပမေဲ့ အဖရေဲ့ကောငျးမှုကွောငျ့ သူတို့မွို့မှာရှိတဲ့ကြောငျးရဲ့ PT ဆရာဖွဈလာခဲ့တယျ…
ဒီလို ဝလေလေလေုပျနတေဲ့မှနျတူကို မိဘတှကေလညျး တညျငွိမျသှားအောငျ အိမျထောငျပွုစခေငျြတယျ…မှနျတူကတော့ အခဈြမပါတဲ့ အိမျထောငျရေးဟာ ဘာညာကှိကှနဲ့ မိဘတှကေို ပွနျတရားခတြယျ..တဈနေ့ Valentine’s Day ရောကျတော့ မှနျတူနဲ့ ဘျောဒါတဈသိုကျဟာ ပနျးခွံထဲမှာပတျပွီး ခဈြသူစုံတှဲတှကေိုလိုကျဖမျးပါတယျ…
ယာဉျကြေးမှုနဲ့မညီဘူး အမြားအမွငျမသငျ့ဘူးဆိုပွီး အားလုံးကိုနှငျထုတျတယျ…လငျမယားတှပေါပွောတဲ့သူတှကေိုတောငျ မှနျတူတို့က မယုံကွညျဘဲ မှတျတမျးပုံတှရေိုကျသတငျးစာထဲထညျ့လိုကျပါသေးတယျ…နောကျတဈနမှေ့နျတူတို့ကြောငျးကို အရမျးလှတဲ့ကြောငျးဆရာမလေးရောကျလာပါရော….
မှနျတူလညျးငမျးမယျကွံရုံရှိသေးတယျ…ဒီဆရာမလေးဟာ သူတို့Valentine’s Day မှာ သတငျးစာထဲရောကျသှားလို့အရှကျကှဲခဲ့ရတဲ့ လငျမယားရဲ့သမီးခြောလေးဖွဈနတေဲ့အခါမှာတော့…ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…
မွန်တူဟာ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားကောင်….ပျော်ပျော်နေတတ်သလို လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်အလုပ်တွေလည်းခေါင်းဆောင်လုပ်လေ့ရှိတယ်…ဘာအလေးအနက်မထားတတ်လို့ ဘွဲ့လည်းမရခဲ့ဘူး…ဒါပေမဲ့ အဖေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် သူတို့မြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းရဲ့ PT ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်…
ဒီလို ဝေလေလေလုပ်နေတဲ့မွန်တူကို မိဘတွေကလည်း တည်ငြိမ်သွားအောင် အိမ်ထောင်ပြုစေချင်တယ်…မွန်တူကတော့ အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဘာညာကွိကွနဲ့ မိဘတွေကို ပြန်တရားချတယ်..တစ်နေ့ Valentine’s Day ရောက်တော့ မွန်တူနဲ့ ဘော်ဒါတစ်သိုက်ဟာ ပန်းခြံထဲမှာပတ်ပြီး ချစ်သူစုံတွဲတွေကိုလိုက်ဖမ်းပါတယ်…
ယာဉ်ကျေးမှုနဲ့မညီဘူး အများအမြင်မသင့်ဘူးဆိုပြီး အားလုံးကိုနှင်ထုတ်တယ်…လင်မယားတွေပါပြောတဲ့သူတွေကိုတောင် မွန်တူတို့က မယုံကြည်ဘဲ မှတ်တမ်းပုံတွေရိုက်သတင်းစာထဲထည့်လိုက်ပါသေးတယ်…နောက်တစ်နေ့မွန်တူတို့ကျောင်းကို အရမ်းလှတဲ့ကျောင်းဆရာမလေးရောက်လာပါရော….
မွန်တူလည်းငမ်းမယ်ကြံရုံရှိသေးတယ်…ဒီဆရာမလေးဟာ သူတို့Valentine’s Day မှာ သတင်းစာထဲရောက်သွားလို့အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ လင်မယားရဲ့သမီးချောလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…